Mpanamboatra sy mpamatsy boaty atoandro Grid China XINLONG
Vita amin'ny fitaovana PP avo lenta. Izy io dia manana hafanana tsara sy fanoherana mangatsiaka ary afaka ampiasaina amin'ny -20 ° ~ 100 °, fa tsy mamokatra akora manimba. Roa ny mari-pana mitokana, mitahiry ny hafanana maharitra mitazona otrikaina bebe kokoa amin'ny sakafo.
Kilasy I Anarana ClassⅡ anarana ClassⅡ Mfofona
Andiana boaty fisakafoanana sela marobe Boaty fisakafoanana mahitsizoro 2-grid amerikana 1 1000ml
Boaty fisakafoanana boribory 3-grid amerikana 2
Boaty fisakafoanana an-kianja 3-kianja amerikana 3
Boaty fisakafoanana 4 grid 1 1000ML
Boaty fisakafoanana 6-grid + vilia 280ml 2
Vata fisakafoanana Octagon 1000ml
Boaty fisakafoanana boribory boribory + fonosana anatiny 1000ML
Boaty dumpling 3
Toerana niandohana Wuhu, Anhui China Anaran'ny marika XINLONG
Laharana maodely 2 grid, 3 grid, 4 grid Fampiasana indostrialy Boaty fitahirizana
Ampiasao fitehirizana sakafo fitehirizana sakafo piknik Teknika tsindrona
Kaomandy manokana Ekeo, ekena ny OEM endri-javatra Azo alefa, Eco-friendly, maharitra, stocked, microwavable ary mangatsiaka
Karazana plastika p ara-nofo plastika sakafo kilasy pp
Teny lakile fitoeram-plastika sakafo lanja
Vidiny Mifaninana fitoeram-bokatra plastika boribory azo alefa miaraka amin'ny sarony 10oz
boky 1000ML Size 220 * 150 * 60mm
tombony Miaro amin'ny lafaoro misy microwave fomba American Style
Fandefasana Fandefasana ranomasina MOQ 50 baoritra / entana
Fanamarinana FDA ISO QS Fahaizana manome
Antsipirian'ny fonosana 150pcs isaky ny baoritra misy sarony sy toby
Haben'ny Caton 47X23.5X44 cm
Karazana Boaty fitehirizana sakafo
endri-javatra Fampisehoana tsara famehezana, tsy misy famoahana ary mitazona ny sakafo ho vaovao
Mety amin'ny lafaoro sy ny vata fampangatsiahana (-20 ° C ka hatramin'ny 120 ° C)
Milamina sy milamina ara-tontolo iainana
Fisehoana maoderina ary mora entina
ara-nofo PP Plastika
Loko Mangarahara, Mainty, fotsy，sy ny sisa.
Fampiasana Voankazo sakafo atoandro
tombony Fonosana azo antoka, ara-tontolo iainana, Fahaizan'ny lanjany, hamafiny matanjaka
Mikraoba, milina fanasan-damba azo antoka & azo ampiasaina indray - Ireo boaty fisakafoanana sakafo lehibe na fitoeran-kanina dia mahazaka ny vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, microwave ary fanasana vilia. Azo ampiasaina indray hitehirizana fotoana sy vola.
1. Orinasa mpivarotra ve ianao sa mpanamboatra?
Izahay dia orinasa miaraka amin'ny departemantan'ny varotra matihanina.
2. Mandra-pahoviana ny fotoana andefasana anao?
Amin'ny ankapobeny dia 5-10 andro raha tahiry ny entana.
na 15-20 andro raha tsy feno ny entana dia mifanaraka amin'ny habetsany izany.
3. Mandra-pahoviana ny fiantohana kalitaon'ny vokatrao?
Manome fiantohana kalitaon'ny orinasa iray taona izahay.
4. Inona avy ireo tombony azo amin'ny vokatrao?
Famoronana endrika vaovao sy marefo; Azo antoka sy avo lenta; Vidin'ny fifaninanana.
5. Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao alohan'ny filaminana?
Azo antoka, tongasoa eto hitsidika ny orinasa. Azafady mba alaharo miaraka aminay mialoha ny fotoana.
6. Manome santionany ve ianao? maimaimpoana ve sa fanampiny?
Eny, afaka nanolotra santionany maimaimpoana izahay nefa tsy mandoa ny vidin'ny entana.
7. Azonao atao ve ny mamokatra ny entana mifanaraka amin'ny volavolainay?
Eny, azonao atao ny mandefa ny kanto famoronana ho anay,
hangataka amin'ny mpiasa matihanina izahay mba hanao ny bobongolo.
8. Ahoana no fiasan'ny QC?
Manatanteraka fitsirihana santionany 5% -10% izahay.
Mila amboarina amin'ny atrikasa ny vokatra raha tsy mahomby ny fanaraha-maso.
Mifikitra amin'ny fijerena habetsahana, baoritra, fonosana / marika, vokatra / fomba / loko izahay.
Tahirin-kevitra momba ny fandrefesana endrika sy asa.
Kaontenera sakafo, fitoeran-tsakafo plastika, kaontenera sakafo 3 ao anaty boaty, boaty fisakafoanana 4 ao amin'ny fitoeran-tsakafo, fitoeram-pisakafoanana 5 ao anaty fitoeran-javatra, fitoeram-panomanana sakafo, boaty bento, boaty fisakafoanana bento, fitoeran-tsakafo fitahirizana, kaontenera azo antoka microwave.
Teo aloha: Ny boatin-tsakafo plastika fanao japoney dia maka vata-pisakafoanana
Manaraka: Kitapo fisakafoanana an-tsokosoko boribory 1000agon